जीवन बदल्न योगी विकाशानन्दका जीवनउपयोगी अमुल्य बिचारहरुको अनुसरण गर्नुहोस – सुदूरखबर डटकम
जीवन बदल्न योगी विकाशानन्दका जीवनउपयोगी अमुल्य बिचारहरुको अनुसरण गर्नुहोस
label समाचार प्रकाशक query_builder June, 01 2019
डा. योगी विकाशानन्दले जीवन अमूल्य भएकोले प्रत्येक मानिसले आनन्दसँग बाच्न सिक्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, जीवनमा आनन्दसँग जिउनका लागि सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण र विचार आवश्यक छ । यहाँ हामीले उनका केही उपयोगी भनाईहरु उल्लेख गरेका छौं । डा. योगी विकाशानन्दका भनाई तपाईंलाई पनि जीवनउपयोगी हुन सक्छन् :
– दुःखको भरपुर सदुपयोग गर्नुस् सुख खोज्नै पर्दैन ।
– हामीलाई लामखुट्टेले होइन हाम्रै अल्छिपनाले टोक्छ ।
– सबथोक पाएर दुःखी हुनुभन्दा सबैथोक गुमाएर सुखी हुनु महानता हो ।
– तपाईं असफलतामा झेल्न चाहानुहुन्न भने सफलताको हकदार पनि हुनुहुन्न
– आमा बाबुलाई प्रेम दर्शाउन नसक्नेले छोराछोरीबाट प्रेम खोज्नु अपराध हो ।
– जो डरका बाबजुद अघि बढ्छ त्यो नै बहादुर हो ।
– यति भिन्नैखाले राजनीतिको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने भिन्नैखाले राजनेता खोज्नुस्
– मान्छे सम्पत्ति नभएर गरीब कहिल्यै हुँदैन, सम्पत्ति नचिनेपछि बल्ल गरीब हुन्छ ।
– अविवाहितहहरु प्रेमको प्रभावले बर्बाद हुन्छन् भने विवाहितहहरु प्रेमको अभावमा बर्बाद हुन्छन् ।